Amanyathelo ukusuka elunxwemeni: ikhaya elingaqhelekanga kunye neyadi
-Ulwandle kumganyana amanyathelo ambalwa: zulazula phantsi nje i-300ft kwaye uya kuziva isanti ezinzwaneni zakho okanye uhlale nje kwaye uphumle kwi-tub eshushu.
-Ukuphila ngaphandle: Ukufumana indlela yokuphila yangaphakathi / yangaphandle yasekhitshini akukho lula ncam kodwa le ndlu iyayenza! Ilungele ukuhlala, iimvakwemini ezinobuvila, isidlo sangaphandle, okanye ubusuku obude phantsi kweenkwenkwezi.
-Ukuphuncuka kosapho lwe-Idyllic: indlu ibonisa umtsalane, umlingiswa, kunye nobutofotofo obufanayo kuyo yonke iminyaka
Ihonjiswe kakuhle ngomxholo oyintlango / waseMexico, inokulingana ukuya kuthi ga kwi-12 yabantu. Ubume bulungile kubahlobo bokonwabisa, iintsapho okanye ii-bachelorettes zonwabela oko iCharleston inokunikela.
-Ikhaya lakho kude nekhaya:
Sizama ukuthi iibhedi zezinye zezona zintle owakhe waphumla kuzo!
Amagumbi okulala ama-5 avumela ubumfihlo obuninzi. Iibhedi ezi-3 zenkosi, i-queen bed e-1, kunye nebhedi yeentsuku ezingamawele ezi-3 (ezimbini ezinamawele amnandi kakhulu)
Kukho master suite enye kumgangatho wokuqala. Umgangatho ophezulu unamagumbi ama-4.
- Nceda uqaphele ukuba indlu incanyathiselwe kwigumbi elincinci kwelinye icala kodwa zonke iindawo zahluke ngokupheleleyo kwaye zisetyenziselwa bucala. Akukho sithuba sabelwana ngaso. Ukungena okwahlukileyo, i-driveway kunye negadi yangasemva
Ngenxa yokuba ziyinxalenye yosapho nazo :) izinja eziqeqeshelwe imbiza zingongezwa kwindawo ebekelwe umrhumo we-100 yeedola ngesilwanyana ngasinye (ukuya kwi-2).
Ikhaya likufutshane kakhulu kwiivenkile zokutyela ezinkulu kunye negrosari; iMt. Pleasant's Towne Centre enokuthenga okukhulu, indawo yemiboniso bhanyabhanya, iivenkile ze-ayisikrimu kunye nezinye iintlobo zokuzonwabisa. Kwaye nje iikhilomitha ezili-12 kumntla weCharleston yembali. Ikwakuhambo olufutshane ukusuka kwihlabathi elaziwayo i-Wild Dunes Golf Course kunye nokusuka kwi-Isle of Palms Marina ukuya kwi-Marina enenkonzo epheleleyo enezikhephe zokurenta kunye neetshatha.
Ukupaka iimoto ezi-4
Zonke iindawo zokuhlala ziquka ukunikezelwa kokuqala kweelinen kunye neetawuli, iitawuli zaselwandle kunye nezihlalo, i-washer kunye ne-dryer, ukunikezelwa kokuqala kweemveliso zephepha kunye ne-detergents, ikhitshi exhotyiswe ngokupheleleyo nge-dinnerware, i-flatware, iimbiza kunye neepani. I-WIFI kunye neeTV ze-ROKU ezihlakaniphile, ukufikelela kwiNetflix.
AKUTSHAYWA. NCEDA UQAPHELE: KUFUNEKA UBUDALA BEminyaka engama-25 UBUDALA UKUZE URESHISE UNGACHATHANGA NGAMANDLA. NGOKUQHELEKILEYO AKUKHO maqela avunyiweyo.